Ramba uchinyemwerera uye rimwe zuva hupenyu huchaneta nekukutsamwisa. - Anotungamira - Quotes Pedia
Sezvo isu tinotsika mukati mehupenyu, hazvigoneki kuti tichasangana nezvakanaka pamwe nenguva dzakaipa muhupenyu. Kuchengeta kumusoro a mafungiro akanaka uye kutarisira mberi ndiyo kiyi yekutibatsira kurarama kuburikidza nehupenyu. Kana iwe uchifunga kuti hupenyu hwako hwakawanda nematambudziko uye urikunzwa kushaya simba tendeukira kune izvo zvakanaka zvehupenyu.
Izvi zvinokubatsira kunyemwerera uye kana iwe uine tariro iyi yekuenda ipapo iwe uchaona kuti une simba rekurwisa matambudziko ako. Hupenyu hucharega kukupa iwe matambudziko nekuti ikozvino une simba zvakakwana kuti utore pane chero chinouya nenzira yako.
Iyo matambudziko haazonzwa kunetseka shure kweizvozvo. Asi kusvika apa hazvisi nyore. Mumwe angafanirwa kupfuura nematanho ekuzvishora uye kushushikana. Asi kana iwe ukaramba uine tariro kumusoro saka iwe pachako unowana mukati mako simba rekurwisa matambudziko ako.
Ziva kuti nguva dzose dzakanaka uye dzakaipa dzichauya muzvikamu. Munguva dzakanaka, tenda uye ukoshese nguva dzese. Mune nguva dzakaipa, ramba wakasimba. Tora rubatsiro kana zvichidikanwa uye dzidza zvidzidzo kuitira kuti uve akasimba. Kuburikidza nenguva yese iyi, chengeta tariro dzako dzakakwirira uye ziva kuti unayo iwe mukati mako kuti urarame nguva dzakaipa.
Aya mafungiro anozokuisa iwe uye oita kuti hupenyu hwako huve nechinangwa. Iwe unozogonawo batsira vamwe kana vachishayiwa nekuti iwe uchave unokwanisa kurondedzera kubva kune chako chiitiko. Nenzira iyi, isu tese tinogona kuwana nzira yekuve nemumwe uye toita kuti hupenyu huwedzere kubereka.
Gara Ramba Uchinyemwerera Quotes
Ramba uchinyemwerera Quotes
Quotes About Mufaro Uye Kunyemwerera
Kunyemwerera Faces Quotes
Kana mumwe munhu akatambisa maminetsi gumi enguva yako, maminetsi masere imhosva yako. - Asingazivikanwe
Kana mumwe munhu akatambisa maminetsi gumi enguva yako, maminetsi masere imhosva yako. - Asingazivikanwe Akabatana Akabatana
Muka zuva rega rega uye utende nezvese zvaunazvo. Zvakataurwa nenzira kwayo kuti isu…
Mangwana haana kubvira avimbiswa, saka nhasi ndinoda kuti shamwari dzangu dzese nemhuri vazive kuti ndinotenda sei kuti mese muri muhupenyu hwangu. - Asingazivikanwe
Mangwana haatombovimbiswa, uye hatina kana chokwadi chekuti mangwana achasvika here kana kuti kwete! There…
Hapana hukama izuva rose, asi vanhu vaviri vanogona kugovana amburera imwe chete uye vapone dutu pamwe chete. - Asingazivikanwe
Zvinofanira kunzwisiswa kuti pakutanga, munhu anofanirwa kunge ari muhukama nemunhu waanaye…
Nguva dzakaomarara dzinogara dzichiratidza shamwari dzechokwadi. - Asingazivikanwe
Nguva dzakaomarara dzinogara dzichikubatsira iwe kuziva kuti shamwari dzako chaidzo ndivanaani! Unogona kuva nezvakawanda…